Faahfaahinta Badeecada Mabda'a shaqada ee daloolka hawo-qaadashada ayaa ah in bambarku uu kor u qaadayo bistooladda yar. Saliida ku jirta haanta saliida waxaa lagu dhuuqayaa qeybta hoose ee bistoolada yar iyada oo loo sii marinayo tuubada saliida iyo hal-waalka. Marka furka hoos loo cadaadiyo, bistoolada yar waxaa ku xiraya waalka hal-wadlaha ah. Saliida ku jirta qeybta hoose ee bistoolada yar waxaa lagu riixayaa qeybta hoose ee bistoolada weyn iyadoo loo marayo wareegga saliida gudaha iyo hal-waalka, iyo qeybta hoose ee bistoolada yar ...
Faahfaahinta Qalabka Qaybta korantada ee Haydarooliga waa saldhig isukeenid yar yar. Waxay ka kooban tahay matoor, mashiinka saliida, baloog isku xiran, iskudub madax banaan, waalka haydarooliga iyo qalabka kaladuwan ee kaladuwan. Marka la barbardhigo saldhigga hidda-wadaha caadiga ah ee isla mabda'a ah, waxay leedahay faa'iidooyinka qaabdhismeedka is haysta, mugga yar, miisaanka fudud, waxtarka sare, waxqabadka lagu kalsoonaan karo, muuqaalka quruxda badan, daadinta iyo qiimaha hooseeya. Waqtigan xaadirka ah, badeecadani waxay leedahay b ...
Faahfaahinta Wax soo saarka 1.Weirun waxay leedahay nidaam maareyn cilmiyaysan oo dhameystiran oo loogu talagalay qeybaha gawaarida iyo qeybaha. Shandong weirun Auto Parts Co., Ltd. waxaa aqoonsan warshadaha si ay u daacadnimo, xoog iyo tayada wax soo saarka. Ku soo dhowow asxaabta dhammaan qaybaha nolosha inay soo booqdaan, hagaan iyo gorgortanka ganacsiga. Shirkadeena waa shirkad xirfadlayaal soosaarid wax soo saar ah. Wax soo saarka ugu muhiimsan waa noocyo kala duwan oo ah bareegyo kala jejebiyey. Waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada noocyada kala duwan, khafiifka fudud iyo kuwa culus ...
Faahfaahinta alaabta 1. Qaabdhismeedka maqaarka maqaska Waxay ka kooban tahay saldhig, labo gacmood oo hoose oo taageeraya, labo gacmood oo taageerta oo sare, garbaha, wiishashka diyaaradda, lowska, sariirta jiifka ah, jiingadda pin iyo usha fur Cidhifyada labada gacmood ee taageerta sare ayaa gudaha loogu rogay xoog adayg, dhammaadkoodana waxaa loo sameeyaa geeryo iyo laalaab; cidhifyada labada gacmood ee taageerada hoose ayaa dib loogu rogaa feeraha xoojiya, dhammaadkuna waxay u samaysan yihiin giraangiraha giraanta oo kala baxa. Mabaa'diida maqaska Jack ...